नेकपा विवाद समाधान होला त ? ओली–प्रचण्ड जुटे निर्णायक छलफलमा « Sansar News -->
नेकपा विवाद समाधान होला त ? ओली–प्रचण्ड जुटे निर्णायक छलफलमा
२१ असार २०७७, आईतवार १३:०६
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवाद समाधानको लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच निर्णायक छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर फर्किए लगत्तै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निर्णायक छलफलको बालुवाटार पुगेका हुन् ।
सहयोगी नेता पनि सहभागी
नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुई अध्यक्षको तर्फबाट दुई–दुई जना सहयोगीसमेत सहभागी छन् । छलफलमा ओलीको तर्फबाट विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल सहभागि छन् भने प्रचण्डको तर्फबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन सहभागी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको विवादास्पद अभिव्यक्तिसँगै झम्सीखेल भेलाले राजीनामा माग्ने निर्णय गरेसँगै नेकपाभित्र विवाद चर्किदैं गएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले अकस्मात संसद स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेसँगै नेकपाभित्रको विवाद गम्भिर मोडमा पुगेको छ ।
यसअघि अध्यक्षद्वयबीच पार्टी विवाद समाधानको लागि शुक्रबार झण्डै चार घण्टा लामो छलफल भएको थियो । जुन छलफल सकारात्मक भएको भनिएपनि निष्कर्ष भने निस्किएको थिएन । यसबीच विवाद भने झनै बढ्दै गएको छ ।